Orinasa sy mpanamboatra plastika any Chine | firaka
Raha manana ianao faritra plastika mila milina na mamolavola, isika dia iray amin'ireo loharanom-pahalalana mahomby indrindra ary afaka mamita tsara ny asa.
Iza amin'ireo fitaovana plastika azontsika atao ary inona avy ireo fananana ara-materialy?
Mampitaha fitaovana vita amin'ny metaly, ny vidin'ny plastika dia manana vidiny mora vidy, lanja maivana, fanoherana ny harafesina tsara ary tombony azo amin'ny insulated heat insulate tsara.
1. PTFE: antsoina koa hoe Teflon, manana fanoherana ny hafanana avo lenta izy, fanoherana ny harafesina tsara, fanosorana avo lenta, tombony tsy azo ovaina ary tsy azo odiana elektrika.
2. PC (Polycarbonate): dia resina thermoplastic matanjaka, manana propriétialy mekanika tsara, mangarahara avo ary fahalalahana mandoko ary fananana tsara fanoherana sy fanamafisana ny fanoherana.
3. Nylon: manana tanjaka mekanika avo, teboka manalefaka avo, fanoherana hafanana tsara, coefficient ambany fikororohana, fanoherana mitafy tsara, insulation elektrika tsara famonoana tena, tsy misy poizina, tsy misy fofona ary fanoherana ny toetr'andro tsara. Ankoatr'izay, aorian'ny fampidirana vera vera dia azo ampitomboina in-2 ny tanjaka.
4. ABS: no polymer lehibe indrindra sy be mpampiasa indrindra. Izy io dia misy fiantraikany tsara amin'ny fanoherana, fanoherana ny hafanana, fanoherana ny hafanana ambany, fanoherana simika ary fananana elektrika, ary mora amin'ny milina.
5. Akrilika: antsoina koa hoe PMMA, manana mangarahara tsara, fitoniana simika ary fanoherana ny toetrandro, mora mandoko, mora karakaraina, bika sy endrika hafa.
Iza amin'ireo fampiharana no ampiasaina amin'ny akora plastika?
Noho ny vidiny mora sy ny lanjany maivana, ny fitaovana plastika dia ampiasaina amin'ny fananganana, fiara, indostria, fitsaboana, fitaterana, elektronika ary fampiharana hafa.
Sombin-tsarimihetsika milina avy any UHMW. Afaka milina ampahany be pitsiny amin'ny antsika isika Masinina Soisa CNC SY Ivotoerana fihodinana CNC.
Ultra-High Molecular Weight polyethylene (UHMW) dia plastika avo lenta, mety tsara ho an'ny faritra masinina izay mitaky fanoherana avo dia avo amin'ny akanjo sy abrasion. Izy io dia manana ny tanjaky ny thermoplastic avo indrindra ary tena mahatohitra ny akora manimba indrindra. UHMW dia manosotra tena ary mahavita tsara amin'ny maripana ambany indrindra, nefa manomboka mihalefaka amin'ny hafanana avo kokoa. Tsy toy ny nylon, manana tahan'ny hakitroka hamandoana ambany dia ambany izy, ka mahatonga azy io ho azo ampiasaina amin'ny tontolo mando.
Ultem dia manana vidin'ny milina 0,7 raha ampitahaina amin'ny vy 12L14.
Teo aloha: Fizarana Titanium